Madaxweynaha Kenya oo kulamo ku aadan Amaanka Xuduuda Somalia la leh Sarakiil – SBC
Madaxweynaha Kenya oo kulamo ku aadan Amaanka Xuduuda Somalia la leh Sarakiil
Kulamada Madaxweynaha wadanka Kenya Kibaki uu la qaadanayo Madaxda laamaha amaanka ee wadanka ayaa ku soo beegmay xilli deegaanada dalxiiska ee wadanka Kenyalagu afduubtay Laba dalxiise oo u dhashay wadamada Britian iyo France.
Wararka ka soo baxaya kulamadan ayaa ku waramaya in Madaxdweynaha uu la kulmay Madaxda Laamaha Amaanka Degdega qaabilsan isaga oo kala hadlaya sida ay u xoojinkaraan guud ahaanba amaanka wadanka isaga oo ku dhiirigeliyay laamaha mukhaabaraadka in laga guuleysan karo cadowga dalka afduubka ka geystay sida uu hadalka u dhigay.
Kulankan balaaran waxaa Goobjooj ahaa guud ahaan laamaha mukhaabaraadka ee wadanka kuwa sirdoonka iyo madaxda sare ee dalka Kenya oo uu ku jiro raiisul wasaaraha raila odinga waxaana guud ahaan ay qireen inay isku raaceen sida ay wax uga qaban lahaayeen soo talaabida maleeshiyaadka soomaalida ee afduubka ka geystay Gudaha wadankaas.
Tan iyo markii afduubyada isxigxiga ay Burcada soomaalidu ka geysteen xuduuda Kenya ay la wadaagto soomaaliya waxaa guud ahaanba isaga barakacay deegaanada Dalxiiska Dadka ajanabiga ah ee inta badan u soo dalxiis tagi jiray Dhul xeebeedka Kenya.
Dhinaca kale Dowlada Britian ayaa digniin u dirtay muwadininteeda inaysan u talaabin Xuduuda wadankaKenya dhinaca xiga dhinaca soomaaliya iyaga oo cabsi ka qaba in muwaadinin kalel halkaas looga qafaasho.
Dadka kenyanka ee hotelada iyo Goobaha dalxiiska ku lahaa Deegaanada loo dalxiis tago oo ay ku jirto Luma ayaa sheegay inay hoteladoodi ay alabaabada u laabeen iyaga oo ka cabsi qaba khatarta Burcad badeeda soomaalida oo deegaanadaas howlgalo is xiga kasameeyay.
Tan iyo afduubyada muddo bil gudaheed ah ka dhacayKenya waxaa ka qaxay deegaanada dalxiiska dad badan oo ajaanib ah oo halkaas horey u daganaan taasi oo ay ugu wacan tahay in Cabsida ka imaneysa dhinaca xuduuda soomaaliya.